China Escalator manamboatra fivarotana andrana sy mpamatsy | Hongli
Ny fantsom-barotra famokarana fitaovana mihetsiketsika
Elevator Escalator Fitaovana famokarana andalana
Escalator fivarotana fitaovana amin'ny tranokala sary 5
1.2m tsipika vita amin'ny famokarana lamba maloto
1,6m tsipika vita amin'ny famokarana lamba malemy
Escalator fitaovana fanohanana
Side panel fanangonana fivarotana indroa
Fivoriambe fananganana escalator
Ny fitsipika miasa
Escalator dia karazana hazakazaka mitohy izay mandrafitra rozin-tariby manana endrika manokana ary mpamindra fehikibo momba ny rafitra manokana. Manana tombony maro izy toy ny fahaiza-mitondra fitaterana be, ny fitaterana tsy tapaka. Noho izany ny fepetra takian'ny fiarovana dia avo noho ny fitaovana hafa. Ampiasaina amina toerana be olona sy ny fahitana olona be dia be, toy ny toeram-pivarotana fivarotana, fikambanana, seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina sy wharf.
Ny fiaran-dalamby dia manana tanjaka ampy ary mafy ary ny loharano samihafa dia apetraka azo atokisana amin'ny hazo lava. Atao ny fanitsiana tsy fahita amin'ireo faritra lasibatra amin'ny hazo. Sprocket dia manamboatra vy vita amin'ny karbonika manokana, aorian'ny fitsaboana ny hafanana, ny fikoronan'ny rano dia mahomby ny tetikasa ambanin'ny tany matetika mba hahazoana antoka fa miasa mandritra ny 20 taona mahery. Ny halavan'ny rojo fiara lehibe indrindra dia tokony ho maotina. Raha toa ka tery loatra na matevina loatra ny rojom-pandehan'ny fiara, dia misy fiantraikany amin'ny fampiononana ny seza mpandeha, izany hoe, hitombo ny lanjan'ny hetsika escalator.
Handrail fehikibo fihazakazaka
Ny haingam-pandeha amin'ny fehikibo handrail dia mifandraika amin'ny dingana ary ny elanelan'ny elanelana amin'ny tongotra dia 0- + 2%.
Fa maninona no tsy maintsy haingana noho ny fihodinan'ny tongotra ny fehikibo handrail?
Voalohany, ny fepetra voalaza etsy ambony dia mitaky ny hafainganam-pandehan'ny fehikibo handrail dia tokony ho lehibe kokoa na mitovy amin'ny hafainganana ny haingam-pandeha sy ny tongotra. Ny fepetra toy izany dia ny fisorohana ny mitazona tànana, tsy noho ny hafainganam-pandehan'ny fehikibo ankibon'ny lalana sy ny pedal ary mahatonga ny vatan'ny olona mihemotra ary misy lozam-pifamoivoizana.
Amin'izay dia mety handratra bebe kokoa ny olona rehefa tsy mahavita mihemotra izy noho ny tsy mahomby.
Escalator fivarotana fitaovana amin'ny tranokala sary 4
Fitaovana fiara amin'ny lalamby amin'ny tany
Ambany latsaka ambany
Tsy misy lalana 10 Hanma Road, tanàna Linpu, distrikan'i Xiaoshan, Hangzhou
Fihaonamben'ny mpiasa amin'ny fikaonan'ny mpiasa ...
Arahabaina ny tranokalan'i Han ...
Olana asongadina - Sitemap